Sida loo sameeyo qalabka baarista beenta ee Arduino | Qalabka bilaashka ah
Ku sii wadista soo-jeedinta si aad u abuurto mashruucyo kuu gaar ah, markan waxaan doonayaa inaan ku tuso sida abuuro beenta xiisaha leh Taas oo aad uga tagi kartid martidaada oo dhan afkooda inay furan yihiin mahadnaq hawlgalkeeda wanaagsan. Sida cinwaanka boostadani sheegeyso, markan waxaan u adeegsaneynaa guddi fudud oo Arduino ah oo u adeegi doona inuu noqdo kantaroole mashruuca oo dhan.
Mashruucan, marka lagu daro barashada sida noocyadan wax lagu ogaado ee qoto dheer u shaqeeya, wax wali xiiso leh, ayaa naga caawin doonta inaan ogaano sida jirkeenu u shaqeeyo iyo jawaabaha kala duwan ee uu bixin karo waxay kuxirantahay xaalada aad kuhesho naftaada ama, dhanka kale, shucuurta aad dareento waxay kuxirantahay su'aasha ay kuweydiin karaan.
1 Sidee beenta u shaqeeyaa
1.1 Liiska qaybaha aan u baahan doono si aan u dhisno beenta beenta
1.1.1 Qaybaha elektarooniga ah ee loo baahan yahay
1.1.2 Qalabka U Baahan Yahay
1.1.3 Qalabka loo baahan yahay
1.2 Waxaan bilownay qaabeynta beenta ogaanshaha annaga oo xireyna mashruuca oo dhan
1.3 Hadda waa waqtigii la horumarin lahaa oo la rakibayo dhammaan softiweerka qalabka baarista beenta
1.4 Waxaan ka sameysaneynaa clips-yada ku socon doona faraha maadada si loo tijaabiyo
1.5 Soo saar sanduuq lagu kaydiyo dhammaan qalabkayaga
Sidee beenta u shaqeeyaa
Kahor xitaa intaadan bilaabin dhisida beentaaga, waxaa laga yaabaa inay ugufiicantahay inaad fahanto sida ay ushaqeyso. Thanks to this, hubaal way kuu fududaan doontaa inaad fahamto sababta qalabka uu ugu xirmayo qaab gaar ah iyo gaar ahaan sababta koodhka ilaha ee ka dhigaya wax walba inay si sax ah u shaqeeyaan in loo qorsheeyo habkaas. Kadibna qaybtaas habeynta ayaa imaan doonta oo hubaal waxaad u baahan doontaa inaad isku daydo la jaanqaad oo u habee mashruuca dhammaan baahiyaha aad u baahan tahay.
Fikradda uu mashruucani ku saleysan yahay ayaa ah in la helo qaab lagu gaaro cabbiraan kala duwanaanshaha niyadda qof kasta. Mid ka mid ah waxyaabaha lagu ogaado been sheegayaasha oo markii hore ay ku dhisnaayeen ayaa ah maqaarku wuxuu isbeddelaa habdhaqanka ku tiirsan gobollo badan sidee buu noqon karaa niyadda aan ku qabno waqti cayiman
Farqigaas ku yimaadda isku-habeynta maqaarkayaga waxaa lagu magacaabaa waxqabadka Electrodermal. (Waxaa jira macluumaad badan oo ku saabsan oo ku saabsan internetka). Thanks to hantidan maqaarka waxaan isku dayi doonaa, iyadoo la kaashanayo Arduino iyo softiweer gaar ah, si aan u aragno dhammaan isbeddeladan ku dhaca ku-qabashada maqaarka iyadoo ku xiran hadba niyadda aan ku leenahay isticmaalka shaxanka.
Si aan u bilowno la shaqeynta baareheena been abuurka ah, sida aan badanaa ku aragno imtixaanada kala duwan, waxaan ku bilaabi karnaa inaan fadhiisanno mowduuc walboo hor yaala qalabkayaga, isku xirka dareemayaasha iyo ka jawaabida su'aalaha fudud sida 'sida loo yaqaan?amahalka aad ku nooshahay'. Su’aalahan Waxay u adeegi doonaan aasaas u ah inay ogaadaan xaaladda maskaxda ee maaddada aan rabno inaan weydiinno. Mar dambe ayaan weydiin karnaa su'aalo kala duwan si aan u ogaanno inay been sheegayaan iyo in kale maxaa yeelay waxay dareemi karaan walwal, taas oo soo saari doonta isbeddel ku saabsan aasaaska.
Liiska qaybaha aan u baahan doono si aan u dhisno beenta beenta
Si loo fuliyo dhammaan mashruucan waa inaan isticmaalnaa microcontroller si loo ogaado kala duwanaanshaha loona diro xogta kombiyuutarka. Dhanka kale, kumbuyuutarkeena si aan xogta uga helno microcontroller-kan, waa in lagu qalabeeyaa qalab isgaarsiineed oo taxan taas oo nagu hogaamineysa gabagabada in, tusaale ahaan, Arduino Mini ama Adafruit noocyadooda jaban aysan shaqeynin. Qodobkani waa lagama maarmaan in la fuliyo mashruucan sidaa darteed, haddii halkii laga heli lahaa Arduino Nano sida aan u adeegsan doonno, waxaan haysannaa nooc kale oo microcontroller ah oo guriga jooga, waan u adeegsan karnaa illaa inta ay leedahay giraan isgaarsiineed oo isku dhafan.
Qaybaha elektarooniga ah ee loo baahan yahay
Gaduud ayaa hogaamiyay
10 iska caabin ah
Waxaan bilownay qaabeynta beenta ogaanshaha annaga oo xireyna mashruuca oo dhan
Sida aad ku arki karto sawirka ku yaal meel ka koreysa xariiqyadan, fiilooyinka mashruuca oo dhan aad buu uga fudud yahay intaad qiyaasi karto maxaa yeelay asal ahaan waa inaad ku dhaqaaqdaa lix tallaabo oo fudud:
Ku xir xarig, ku deeqsi dhererkiisa, biinanka analooga ee 'Arduino'
Ku xir ku caabbinta Ground iyo siligga aan horay ugu xirnay pinka analogga ee 'Arduino'
Ku xir xarig xadhig dheer dheer Arduino's 5 volt pin
Ku xir anode (lugta dheer ee leedhka) ee cagaaran ee keentay pin 2 iyo cathode (lug gaaban) dhulka
Ku xir anode ee liinta horseedda pin 3 iyo cathode dhulka
Ku xir anode casaanka horseedka pin 4 iyo cathode dhulka.
Tani waa dhammaan fiilooyinka aad u baahan tahay inaad ku xirnaato. Mabda 'ahaan, waa ku filan tahay sidan oo kale oo ku taal dusha sare si aan waxba u dhaqaaqin. Waxaan dabooli karnaa intaas oo dhan goor dambe oo waxaan siin karnaa aragti soo jiidasho leh.
Hadda waa waqtigii la horumarin lahaa oo la rakibayo dhammaan softiweerka qalabka baarista beenta
Kahor xitaa intaanan bilaabin inaan wax horumarino, waa inaan sifiican u qeexnaa, labadaba barnaamij iyo isku keenida mashruuca oo dhan waxaan isticmaali doonaa nooca ugu dambeeya ee Arduino IDE. Waxaan u adeegsan doonnaa noocyadan tan iyo, markii ugu dambeysay ee la sii daayay, kormeeraha la isku dhajiyay kaas oo noo oggolaanaya inaan aragno xogta la helay qaab muuqaal ah oo ay ugu mahadcelinayaan jaantus waqtiga dhabta ah halkii laga isticmaali lahaa kormeeraha taxanaha ah, halkaasoo macluumaadkani uu u muuqday qaabka qoraalka.
Si aan u socodsiino kormeerahan waa inaanu fureynaa Arduino IDE, tag aaladda qalabka waana inay ku yaalliin wax ka hooseeya kormeeraha taxanaha ah. Mar alla markii aan waxaas oo dhan isku dubaridanno, waa inaad soo degsataa oo keliya feylka aan kaaga tagayo wax ka hooseeya xariiqyadan, fur oo ku dheji kombuyutarkaaga.
Waxaan ka sameysaneynaa clips-yada ku socon doona faraha maadada si loo tijaabiyo
Marka aan mashruuca si rasmi ah u dhameystirno, waxaa la joogaa waqtigii aan qaadi lahayn tallaabo kale iyo Samee boodhadh mas'uul ka noqon doona soo saarista tabinta maqaarkayagu soo bandhigo waqti cayiman.
Sida aad ku arki karto sawirrada ku kala firirsan isla isla qoraalkan, fikradda ayaa dhex socota ku dheji dariiqa aluminiumka gunta hoose ee velcro strip. Tani waa in lagu sameeyaa labada qaybood ee velcro ee aan isticmaali doonno.
Mar alla markii aan diyaarinno xariijimaha, oo sida aad ku arki karto sawirka ku yaal meel ka koreysa xariiqyadan, waxaa la joogaa waqtigii ku xir kumbuyuutarka aluminium ee xarigga aan ku xirnay pinka analogga ee Arduino. Waa inaan ku dhaqaaqnaa talaabadan, sida saxda ah si isku mid ah, qeybta kale ee velcro iyo xarigga aan ku xirnay qeybta loo yaqaan 'Arduino pin' ee hadda jira, ilaa 5 volt pin. Hubso in iskuxirayaashu ay xooganyihiin oo aysan ka jareynin kaliya adoo dhaqaajinaya velcro wax yar.
Soo saar sanduuq lagu kaydiyo dhammaan qalabkayaga
Xaaladdan oo kale waannu sharad geli doonaa Samee nooc ka mid ah sanduuqa si aad ugu kaydiso dhammaan qaybaha baareheena beenta si aad uxun laakiin qaab wax ku ool ah. Fikradda ayaa ah in la abuuro qol yar oo lagu kaydiyo giraanyada velcro. Tani, markeeda, waa inay ku jirtaa saddex godad yaryar si LED-yada loo arki karo.
Sida aad hubaal u maleynaysid, sheyga aan u adeegsan doonno samaynta sanduuqan oo kale waa kartoonada ka muuqata liiska qalabka lagama maarmaanka ah. Kartoonka aan hayno, waxaan ka goyn doonaa laba leydi oo ah 15 x 3 sentimitir, leydi 15 x 5 sentimitir ah, seddex xagal ah 4 x 3 sentimitir, leydi 9 x 5 sentimitir ah iyo leydi 6 x 5 sentimitir ah.
Marka leydilada oo dhan la jaro, waxaan soo qaadaneynaa midka 15 x 5 cm kaas oo u adeegi doona saldhig ahaan. Labada leydi 15 3 iyo 5 iyo 3 5 3 waxaa lagu dhejin doonaa dhinacyada salka. Hadda waxaa la joogaa waqtigii lagu dhejin lahaa leyliga saddexaad ee 6 x XNUMX salka dhererkiisu yahay XNUMX sentimitir dhinaca.
Halkaa marka ay marayso waa inaad lahaataa leydi oo u qaybsan laba dhinac, mid dhererkiisu yahay 6 sentimitir, midka kalena dhererkiisu yahay 9 sentimitir.. Dhinaca dhererkiisu yahay 6 sentimitir waa halka aan dhigeyno qalabka elektiroonigga halka dhinaca kale ay tahay meesha farta lagu goynayo.
Waqtigan xaadirka ah kaliya waa inaan jarnaa 3 godad, cabbirka LED-yada, oo ah leyliga 6 x 5 cm, iyaga oo ku dhajinaya 6 cm. Waxaa loo daayaa oo kaliya in lagu dhejiyo, iyadoo cajalad dhejisan leh, dhinaca gaaban ee leyliga 9 x 5 cm dhinaca ugu fog dhinaca 9 cm. Talaabadan ugu dambeysa waxay u adeegi doontaa nooc dabool ah oo kor iyo hoos u dhaqaaqi doona si uu u keydiyo una muujiyo suufka farta..
Marka aan ku rakibno dhammaan waxyaabaha ku jira sanduuqa gudihiisa, haddii ay wax waliba si fiican u socdeen, waa inaan horteenna haysannaa beenti yar oo baare. Sidaad u maleynaysid, inkasta oo hawlgalkeedu aad ufudud yahay, runta ayaa ah inaysan ahayn mid aad u saxsan tan iyo markii inta badan qalabka beenta xirfadleyda waxay leeyihiin tiro badan oo dareemayaal ah, sida kormeeraha garaaca wadnaha, si loo hubiyo in badan oo hubaal ah haddii maado ay been sheegayso iyo in kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » Sida loo sameeyo qalabka baarista beenta ee Arduino